भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ : डा. बाबुराम भट्टराई – www.agnijwala.com
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ : डा. बाबुराम भट्टराई
पार्टीको जनसम्वाद यात्राका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक दलहरु समय अनुकूल परिवर्तन हुन नसक्दा देशमा लोकतन्त्रिक संस्कार हुन नसकेको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मुलुकमा भ्रष्टचार झनै मौलाउँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था जरुरी रहेको बताए । भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि देशमा सुशासन र विधिको शासन आवश्यक रहेको बताए । उनले जनता अधिकार सम्पन्न नहुँदासम्म देशको आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्न कठिनाई पर्ने बताए ।‘हामीले आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेका छौं डा. भट्टराईले भने, ‘आर्थिक विकास र समृद्धिको जग श्रम र समय हो । श्रम र समयको हामीले महत्व बुझ्न जरुरी रहेको छ । हामीमा श्रम गर्ने संस्कृति बस्यो भने आफैमा समृद्धिका जग बसाल्न सहज हुने छ ।’
आफू अर्थमन्त्री भएको बेला मध्यपहाडी लोकमार्गको सुरूवात गरेको बताउँदै संयोजक डा. भट्टराईले भौतिक र समाजिक पुर्वाधारबाट विकासको आधार खडा र यसमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । ‘अब लड्न भिड्न आवश्यक छैन,’ डा. भट्टराईले भने, ‘देशको चौतर्फी विकासको सोच राजनीतिका नेतादेखि नेपाली नागरिकमा हुनुपर्छ ।’
उनले देश विकासका लागि राज्यले पुर्वाधार निर्माण र वित्तिय विकासमा काम गरेर, निजि क्षेत्रले उद्योग, कृषि, पर्यटन र सेवामा लगानी गरेर सम्भव भएको बताए । उनले देशमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए ।
आफूहरुले माओवादीलाई यो स्थानमा ल्याएको र अहिले त्यसको यात्रा पुरा भएकोले आफू नयाँ पार्टीमार्फत देशको विकासमा लागेको उनले बताए । नेताहरु सत्तामा पुगेपछि चास्नीमा फसेझैै फस्ने गरेको उनको भनाइ छ ।